Mahdi Guuleed iyo Garsoore Cabdiqawi oo siyaabo kala duwan uga hadlay xariiqa soohdinta badda ee ICJ - Jowhar somali news leader
Mahdi Guuleed iyo Garsoore Cabdiqawi oo siyaabo kala duwan uga hadlay xariiqa soohdinta badda ee ICJ
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa ku tilmaamay sababta Kenya loo siiyay qaybta yar isaga oo ku sifeeyay in si maxkamadda go’aankeeda ugu cuntamo labada Dowladood sidaas loo xukumay sida uu hadalka u dhigay.
Mahdi Guuleed ayaa sheegay in waxyar oo miiq Kenya la siiyay oo weliba marin ah, sababta loo siiyay ayaa tahay in uu u cuntamo go’aanka Maxkamadda.
Hase yeeshee, Garsoore Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo kamid ah Garsoorayaasha Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ah ee ICJ ayaa kahor yimid khadka dhexe ee Maxkamadda dhexmarisay Soohdinta Badda Soomaaliya halkaas oo Kenya ay ku heshay qayb aan badneen.
Cabdiqawi ayaa sheegay in Xadeynta ay muujineyso in garsoorayaasha ay ka tallaabeen heerkooda una gudbeen Juqaraafi ahaan maadaama keliya laga doonayay in ay shaaciyaan natiijada cidda isla leh goobta la isku qabsaday.
Sidoo kale, Garsoore Cabdulqawi ayaa ku dhaliilay Maxkamadda ICJ go’aanka ay ku qaloocisay xariiqii toosnaa isagoo ku tilmaamay qaloocinta soohdinta inay qalad ahayd.
Dowladaha Soomaaliya iyo Serbia oo ka wadahadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen ganacisga iyo Maalgashiga
Barakac ka bilwday magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud